ရေကန်အတွင်း ဂုံးငုပ်ဖမ်းဆီးသူ အမျိုးသား(၂)ဦး ရေနစ်သေဆုံး
ဧပြီလ(၂၈)ရက်နေ့ ထုတ် The Voice Weekly Vol.10/No.15
ဧပြီလ(၂၆)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာသံတော်ဆင့် အပတ်စဉ်သတင်းစာ အတွဲ (၃)၊ အမှတ် (၇)
မိုးကုတ်က ရွှေဆိုင်နှစ်ဆိုင်ကို အကြမ်းဖက်ဓားပြတိုက် ရန် ပြည်တွင်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က လက်နက် ငှားရမ်းပေးခဲ့ဟု ဖမ်းဆီးခံရသူ များထွက်ဆို
မုံရွာမြို့ သလ္လာရပ်ကွက်နေအိမ်မှ ၀ါယာရှော့ဖြစ်ပွားကာ နေအိမ်(၂၃)လုံးခန့် မီးလောင်ကျွမ်း
ပုသိမ်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာအချို့ သောက်သုံးရေ ခန်းခြောက်မှုများ တွေ့ကြုံနေရ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူသန်း ၃၀ ကျော် ငှက်ဖျားပိုး ကူးစက်နိုင်ခြေ ရှိဟုဆို
မြောက်ဦးက ရေကန်တွေပြု ပြင် ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ငွေလှူ
ရခိုင်တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်အချို့ စီးနင်းလာသော လိုင်စင်မဲ့ ကားသုံးစီးကို ဖမ်းဆီး
စာသင်ကျောင်းများတွင် ဓာတုဆိုးဆေးပါ အစားအသောက် ရောင်းချမှု ပိတ်ပင်ရန် ဆွေးနွေးမည်
အချုပ်သားကို ရိုက်သည့် ဒုရဲအုပ် ၂ ဦးနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ ဦးကို လူသတ်မှုဖြင့် ထောင်၁၀နှစ် ချမှတ်
ဧပြီလ(၂၆)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်းနေ့ စဉ် သတင်းစာ
ဧပြီလ(၂၆)ရက်နေ့ ထုတ် ကြေးမုံနေ့ စဉ် သတင်းစာ
ဧပြီလ(၂၅)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာတိုင်း(မ်) ဂျာနယ် အတွဲ ၃၄ ၊ အမှတ် ၆၆၉
ဧပြီ ၂၅ ရက်၊ သောကြောနေ့ ညနေခင်း Planet Evening
ဧပြီလ(၂၄)ရက်နေ့ ထုတ် ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ် အတွဲ - ၄၊ အမှတ် - ၁၉၃
မြန်မာနိုင်ငံသား ၃၀ကို တရားမ၀င်ခေါ်လာတဲ့ ထိုင်းဘုန်းကြီးကိုဖမ်းဆီး (ရုပ်/သံ)
ရေနံချက်ဖိုတွေကြောင့် သစ်တောတွေ ပြုန်းတီး (ရုပ်/သံ)
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၂၆ ၂၅.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁၅၃၀ အချိန်တွင် သန်လျင်မြို့မ ရဲစခန်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် သန်လျင်မြို့နယ်၊ ပဲခူးစု ရပ်ကွက်ရှိ စက်ရေကန်၌ လူ(၂)ဦးရေနစ် သေဆုံးကြောင်း သတင်းအရ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ သေဆုံးသူများမှာ သာကေတမြို့နယ် နေသူများ ဖြစ်သော ကိုသိန်းရီ၊ (၃၄)နှစ်၊ (ဘ)ဦးသိန်းရင် နှင့် ကိုညီညီလွင်၊ (၂၈)နှစ်၊ (ဘ)သိန်းရွှေတို့(၂)ဦးဖြစ်ပြီး ပြင်ပဒဏ်ရာများ မတွေ့ရှိဘဲ ရေနစ်သည့် လက္ခဏာများဖြင့်ေ
Posted: 26 Apr 2014 04:15 AM PDT
လားရှိုး၊ ဧပြီ ၂၅ ဧပြီလ ၂၄ရက်နေ့ ၊ နံနက် ၈နာရီခန့် က လားရှိုးမြို့ ၊ ရပ်ကွက် (၅)၊ ရေကန်တောင်၊ ရေကန်အမှတ် (၃) တွင် အမည်မသိ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရေနစ်သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ ရှိခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ ဖော်ပြပါအချိန်တွင် စည်ပင်ဝန်ထမ်း တစ်ဦးက အဆိုပါ ရေကန်အမှတ် (၃) အနီးမှ ဆိုင်ကယ်စီးလာစဉ် ရေနစ်နေ သော အမျိုးသမီးကို တွေ့ ရှိခဲ့ရာ ရေကန်တောင်အစောင့်များကို အကြောင်းကြားပြီး ၀ိုင်းဝန်း ဆယ်ယူခဲ့သော်လည်း
Posted: 26 Apr 2014 04:07 AM PDT
နေပြည်တော် ဧပြီ ၂၆ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တမူးခရိုင် တမူးမြို့၌ ဧပြီ ၂၅ ရက်ညနေပိုင်းက တရုတ်နိုင်ငံသား ၈ ဦးအား မော်တော်ယာဉ် တစ်စီး၊ လက်နက်ငယ် ၈ လက်၊ ကျည်ဆံများ၊ လက်ပစ်ဗုံးများ၊ ဆက်သွယ်ရေး စကားပြောစက်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံ တစ်ချပ်၊ တယ်လီဖုန်းများ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိ ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဧပြီ ၂၅ ရက် ညနေ ၄ နာရီ မိနစ် ၂ဝ ခန့် တွင် တမူးမြို့အဝင် ၃ မိုင် စစ်ဆေးရေးဂိတ်သို့
Posted: 26 Apr 2014 03:59 AM PDT
ဧပြီလ(၂၈)ရက်နေ့ ထုတ် The Voice Weekly Vol.10/No.15 ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 26 Apr 2014 03:57 AM PDT
ဧပြီလ(၂၆)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာသံတော်ဆင့် အပတ်စဉ်သတင်းစာ အတွဲ (၃)၊ အမှတ် (၇) ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 26 Apr 2014 03:42 AM PDT
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၂၅ - မိုးကုတ်ရှိ ရွှေဆိုင်နှစ်ဆိုင်ကို အကြမ်းဖက် ဓားပြတိုက်ရန် လက်နက်ငှားရမ်းပေး ပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် သူ နှစ်ဦး မှာ ပြည်တွင်း လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုမှဖြစ်သည်ဟုဖမ်းဆီး ခံရသူ လေးဦးမှ သက်သေထွက်ဆို ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော် ရှိ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့် ထောက် လှမ်းရေးဌာနမှ ရဲအရာရှိကြီးတစ်ဦး ကပြောသည်။ ဓားပြတိုက်ရန် ၄င်းတို့လက် နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများမှ လက်
Posted: 26 Apr 2014 03:24 AM PDT
၂၅. ၄. ၂၀၁၄ ည( ၁၁)နာရီအချိန်ခန့် တွင်မုံရွာမြို့ သလ္လာရပ်ကွက် သလ္လာအမှတ်(၄) ရပ်တွင် ဦးကျော်မြင့် ဒေါ်သင်းသင်းဟန် တို့ ၏ နေအိမ်တွင် အိမ်ငှား ငှားရမ်း နေထိုင်သူဦးဘိုဌေး ဆိုသူ ၏ နေအိမ် မှ ၀ါယာရှော့ဖြစ်ပွား ကာ နေအိမ်(၂၃)လုံးခန့် မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရကြောင်း မုံရွာခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံး ၏ ကနဦး ကြေးနန်းများအရ သိရသည်။ "လောင်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ ၀ါယာရှော မှ စပြီးလောင်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မုံရွာခရိုင်
Posted: 25 Apr 2014 09:55 PM PDT
တအောင်း လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (TNLA) နှင့် တပ်မတော်တို့ အကြား လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများကြောင့် လက်ဖက်စိုက် တောင်သူ များ လက်ဖက်ခင်း များကိုပစ်ကာ ရှောင်တိမ်း ပုန်းရှောင် နေရကြောင်း တအောင်း လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (TNLA) ပြန်ကြားရေးရုံး မှ သတင်း ရရှိသည်။ တအောင်း လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် အနေဖြင့် မတ်လ နှင့် ဧပြီလ လက်ဖက်စိုက် ရာသီတွင် ၎င်း တို့လှုပ်ရှားရာ ဒေသ ရှမ်း ပြည်နယ်ြေ
Posted: 25 Apr 2014 09:50 PM PDT
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၏ မြို့တော် ပုသိမ်မြို့နယ် အတွင်းရှိ မဒေါ့ကုန်း၊ အနန်းကုန်း အပါဝင် ကျေးရွာဒေသ အချို့ နှင့် ပုသိမ် မော်တင် ကားလမ်း တစ်လျှောက်ရှိ ကျေးရွာများတွင် နေပူပြင်း မှုကြောင့် သောက်သုံး ရေကန်များ၊ စမ်းချောင်းများ ခန်းခြောက်ကာ သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ်မှု ဖြစ်ပေါ်နေ ရကြောင်း ဒေသခံ များက ပြောသည်။ သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ်သော အခက်အခဲ တွေ့ကြုံ နေရသည့်ေ
Posted: 25 Apr 2014 09:47 PM PDT
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၂၅ အာရှဒေသ ငှက်ဖျားရောဂါပိုး ကူးစက်နှုန်း အမြင့်ဆုံး စာရင်းဝင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူဦးရေ ၃၁ သန်းနီးပါးသည် ငှက်ဖျားရောဂါပိုး ကူးစက်နိုင်ခြေ ရှိနေကြောင်း Malaria Consortium Myanmar ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Ms. Yasmin Padamsee Forbes က The Voice သို့ ပြောကြားသည်။ နိုင်ငံတစ်ဝန်း မြို့နယ် ၃၃၀ အနက် ၂၈၄ မြို့နယ်သည် ငှက်ဖျားရောဂါ အတွက် စိုးရိမ်ဖွယ် အခြေအနေ ရှိနေပြီး ကူးစက်နိုင်ခြေ ရှိသည့် ၃၁
Posted: 25 Apr 2014 09:03 PM PDT
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့နယ်က တိမ်ကောနေ တဲ့ ရေကန်ဟောင်း (၄) ကန်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်တူးဖေါ် ဖို့အတွက် ကျပ်ငွေ ၁၉၄ သိန်းနီးပါးကို ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က လှူဒါန်း လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအလှူငွေ ၁၉ ၃၅၈ ဝဝဝ ကျပ်ကို ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့ညနေက ရန်ကုန်မြို့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းနေအိမ်မှာ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖေါင်ဒေးရှင်း ကိုယ်စား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ၊ ဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်စား မိမိလက်ခံ ရယူခဲ့တယ်လို့
Posted: 26 Apr 2014 04:08 AM PDT
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး မြန်မာ- အိန္ဒိယနယ်စပ် တမူးမြို့တွင် တရုတ်နိုင်ငံသား ရှစ်ဦး စီးလာသည့် ကားပေါ်မှ လက်နက်ငယ်များ၊ ကျည်တောင့်များနှင့် လက်ပစ်ဗုံးများ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ ကြောင်း တမူးခရိုင်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ သတင်းရရှိ သည်။ ဧပြီ ၂၅ ရက် ညနေ ၅ နာရီကျော်တွင် တမူးမြို့မှ ကလေးမြို့ သို့ အထွက် သုံးမိုင်အကွာ အိန္ဒိယ-မြန်မာချစ်ကြည်ရေး ကားလမ်းမကြီးပေါ်တွင် ဖမ်းမိခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။ သိမ်းဆည်းရမိသော
Posted: 25 Apr 2014 08:52 PM PDT
ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ညီ လာခံ တက်ရောက်ရန် မြ၀တီ မြို့မှ ထွက်ခွာလာသော ရခိုင်တပ်မတော် (AA) မှ ခေါင်း ဆောင်အချို့ စီးနင်းလာသည့် ကားသုံးစီးမှာ လိုင်စင်မဲ့ကားများ ဖြစ်နေသဖြင့် ထောက်ကြန့်ရဲ စခန်းတွင် ဧပြီလ ၂၅ ရက်က ဖမ်းဆီးထားကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။ ‘‘သူတို့ကို မင်္ဂလာဒုံယာဉ် ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ကနေ စစ်ဆေးရေး လုပ်နေတုန်း ဖမ်းလိုက်တာပါ။ အမှုကို စစ်ဆေးနိုင်ဖို့အတွက် ကားတွေကို ကညနမှာ စစ်နေပါ တယ်။ ကညနက
Posted: 25 Apr 2014 01:24 PM PDT
ဒီတစ်ပတ် အစောပိုင်းက မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းမှာ နည်းပြ ဒေးဗစ် မွိုင်းစ်ကို ထုတ်ပယ် ပြီးတဲ့နောက် အသင်းအနေနဲ့ မရေမရာ ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ် ရှိခဲ့တယ်လို့ မန်ယူရဲ့ ယာယီ နည်းပြသစ် ရိုင်ယန်ဂစ်စ်က ဖော်ပြ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မနက်ဖြန် အိုးထရက်ဖို့ဒ် အိမ်ကွင်းမှာ ကစားရမယ့် နောရစ်ခ်ျနဲ့ ပွဲမှာ ကစားသမားတွေ အစွမ်းပြ နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်းနဲ့ မန်ယူ ပရိတ်သတ်တွေ မျက်နှာမှာ အပြုံးတွေ ပြန်ဝေဆာ
ရန်ကုန်၊ မဇ္ဈိမ။ ။ ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ အခြေခံ စာသင်ကျောင်းများတွင် အန္တရာယ်ရှိသည့် ဓာတုဆိုးဆေးများပါဝင်သော အစားအသောက်များ ရောင်းချနေမှုကို လာမည့် ကျောင်းဖွင့် ရာသီတွင် စီမံချက်ချမှတ်၍ ပိတ်ပင်ရန် အမတ်တစ်ဦး၏ အရေးဆိုမှုကြောင့် ဧပြီ ၃၀တွင် ပြုလုပ်မည့် ရန်ကုန်တိုင်း လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးတော့မည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဓာတုဆိုးဆေးပါ အစားအသောက်များ ရောင်းချမှုကို ထိရောက်စွာ ပိတ်ပင်ရန် အစိုးရ
Posted: 25 Apr 2014 01:15 PM PDT
မြန်မာနိုင်ငံက ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေ အပေါ် မြန်မာစစ်တပ်က အတင်းအဓမ္မ ပြုကျင့်တာတွေ ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ အတွက်၊ ဒီကျူးလွန်မှုတွေက ရပ်တန့် သွားအောင်နဲ့ ကျူးလွန်သူတွေကို အရေးယူဖို့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီကို WLB အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ)က အစီရင်ခံ တင်ပြ လိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အတင်းအဓမ္မ ပြုကျင့်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အတွက် တရားမျှတမှုရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့
Posted: 25 Apr 2014 01:07 PM PDT
မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲတာ၊ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်တာနဲ့ ရောင်းဝယ်တာတွေ ပပျောက်စေရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် ကချင်- မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီး ကာကွယ်ရေးနေ့ကို ဒီကနေ့ ကချင်ပြည်နယ် ဒေသအနှံ့နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ မြစ်ကြီးနားနဲ့ ကချင်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ KIO ဌာနချုပ်လိုင်ဇာမှာ ကျင်းပတဲ့ အခမ်းအနားမှာတော့ လူအင်အားထောင်နဲ့ ချီပြီး တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကို ဗွီအိုအေြ
Posted: 25 Apr 2014 01:00 PM PDT
ရန်ကုန်၊ မဇ္ဈိမ။ ။ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ဖြူးမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ ရဲအရာရှိ နှစ်ဦးနှင့် ရဲတပ်သား ၂ ဦးတို့ကို တောင်ငူခရိုင် တရားရုံး (၁)က ဧပြီ ၂၅ရက်တွင် လူသတ်မှု ထင်ရှားခဲ့သဖြင့် အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်စီ ချမှတ်လိုက်သည်ဟု အသတ်ခံရသည့် လူငယ်၏ အစ်မဖြစ်သူ မမြင့်ခက်ခက်မွန်က မဇ္ဈိမသို့ ပြောသည်။ ၎င်းတို့ ၄ ဦးမှာ လူသတ်မှု ကျူးလွန်ကြောင်း ထင်ရှားသဖြင့် ခရိုင်တရားသူကြီး မောင်မောင်အေးက အထက်ပါအတိုင်း
Posted: 25 Apr 2014 12:43 PM PDT
ဧပြီလ(၂၆)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်းနေ့ စဉ် သတင်းစာ သတင်းစာ ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 25 Apr 2014 12:40 PM PDT
ဧပြီလ(၂၆)ရက်နေ့ ထုတ် ကြေးမုံနေ့ စဉ် သတင်းစာ သတင်းစာ ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 25 Apr 2014 12:35 PM PDT
ဧပြီလ(၂၅)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာတိုင်း(မ်) ဂျာနယ် အတွဲ ၃၄ ၊ အမှတ် ၆၆၉ ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 25 Apr 2014 12:33 PM PDT
ဧပြီ ၂၅ ရက်၊ သောကြောနေ့ ညနေခင်း Planet Evening သတင်းစာ ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 25 Apr 2014 12:30 PM PDT
ဧပြီလ(၂၄)ရက်နေ့ ထုတ် ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ် အတွဲ - ၄၊ အမှတ် - ၁၉၃ ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 25 Apr 2014 07:12 AM PDT
တရားမဝင် မြန်မာနိုင်ငံသား ၃၀ ကို ခေါ်ဆောင်လာတဲ့ ထုိုင်းဘုန်းကြီး နဲ့ ကားသမားတွေကို ထုိုင်းရဲက ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ခွန်ဘသာတင်ဆက်ထားပါတယ်။ DVB TV - 22.04.2014 ရုပ်/သံ ကြည့်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 25 Apr 2014 06:54 AM PDT
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးထဲက ရေနံချက်ဖိုတွေကြောင့် သစ်တောတွေ ပြုန်းတီးနိုင်သလို ဒေသခံတွေရဲ့ လောင်စာ အတွက်လည်း အခက်အခဲ ရှိလာနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ဦးကိုကိုကြည်က ပေးပို့ထားပါတယ်။ DVB TV - 24.04.2014 ရုပ်/သံ ကြည့်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ